Fampandrosoana eny ifotony: nahavita drafitra fanajariana ny tany ireo kaominina 20 | NewsMada
Fampandrosoana eny ifotony: nahavita drafitra fanajariana ny tany ireo kaominina 20
Voavolavola ny drafitra ifotony ho fanajariana ny tany (SAC) ho an’ny kaominina 20 ato anatin’ny faritra Analamanga. Natolotra, omaly, teny amin’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany ho an’ny ben’ny Tanànan’ireo kaominina ireo ny didim-pitondrana fankatoavana ny SAC 20. Nomena fitaovana toy ny ordinatera miaraka amin’ny kojakoja samihafa ny kaominina voakasika hanatanterahana ny asa fampandroana miainga avy amin’ny drafitra ifotony. Antontan-taratasy novolavolain’ny mpitantana ny kaominina niaraka amin’ny solontenan’ny minisitera rehetra miasa ao anatin’ny kaominina izany. Fitaovana iray hamaritan’ny kaominina ny zavatra rehetra hotanterahina ao anatin’ny 15 taona ho avy ny drafitra. Voalaza mazava ny toerana natokana ho an’ny toeram-ponenana sy ny fanitarana azo atao, ny faritra ho an’ny fambolena…
Fananganana tohodrano sy angovo…
Ho an’ny dimy taona voalohany, asa maika hotanterahina ny tetikasa iadiana amin’ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetr’andro amin’ny fiainan’ny olona andavanandro. Anisan’izany ny fananganana tohodrano valo afaka hanondraka tanimbary sy tanimboly 200 ha. Teo koa ny kaominina nisafidy ny hanao fambolen-kazo amin’ny velarana 735 ha izay havadika ho angovo avy eo.
Nanohana ny famolavolana ny drafitra ifotony ny Vondrona eoropenina sy ny fanjakana alemana amin’ny alalan’ny minisitera federalin’ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy fampandrosoana (BMZ). Efa-taona ny faharetan’ny tetikasa fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny takina amin’ny fiatrehana ny fiovan’ny toetrandro ho an’ny fampandrosoana PRCCC- PAGE /GIZ ary niarahana niasa tamin’ny kaominina 35. Nizara ny drafitra sy ny fitaovana, omaly ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny minisitry ny Tontolo iainana niaraka amin’ny masoivohon’ny Vondrona eoropeanina, i Giovanni Di Girolamo.